बालबालिकाको सुनौलो भविष्यका लागि पहिला यी साना कुरा सोचौं
‘छोरो जन्मियो यार, अब म यसलाई पाइलट बनाउछु । छोरी जन्मिन् अब म यिनलाई वकिल बनाउँछु यार ! अहिले वकिलको क्रेज ठूलो छ क्या !’ विहिवारको दिन म एउटा स्कुलमा पुग्दा दुईजना सरहरु यसरी गफिरहेका थिए । म छेउमै बसेर उनीहरुको गफ सुन्दै मुसुमुसु हाँसे । पाले दाइले टङ घन्टी बजाए । दुवैजना जुरुक्क उठेर कक्षा कोठातिर हिडें ।
सेराफिम्स स्कुलको रजत जयन्ती मनाइयो
काठमाडौंको कालिमाटीमा अवस्थित सेराफिम्स पब्लिक स्कुलको २५ औं वार्षिकोत्सव एवं रजत जयन्ती समारोहका अवसरमा समाजमा विशेष योगदान पु¥याउनुहुने उद्योगी, खेलाडी, समाजसेवी, शिक्षासेवी, प्रहरी बृत्त र साहित्यकार एवं पत्रकार गरी विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई एक समारोहमा सम्मानित गरिएको छ ।
– अञ्जना राजबंशी
मेरो जीवन जहाँ सबै भन्दा पहिले म छु, मेरो परिवार छ, मेरो समाज छ अनि यो सिंगो बिश्व छ । कति धेरै बाँधिएको छ मेरो जीवन । तर पनि म दुखि छुइन कारण मेरो जीवनमा मेरो उद्देश्य छ, ‘खुशी हुने र सबैलाई खुशी दिनेमा’ आफूलाई एकदमै माया गर्छु र मलाई थाहा छ मेरो जीवनले पनि माया गर्छ मलाई । म र मेरो जीवन बीचको यो अनन्त प्रेमले मेरो हरेक पाइलामा मलाई ऊर्जा दिन्छ र अघि बढ्छ । तसर्थ मेरो जीवन मेरो लागि एउटा शक्ति हो, प्रेरणा हो ।
बालसाहित्यका लागि मेरा केही अभिमतहरू
बालसाहित्य लेखन एउटा गम्भीर लेखन हो । जसरी एउटा सानो बालकलाई लिटो तयार गर्न आमाले भरपूर मिहिनेत गर्छिन्, त्यसरी नै एउटा बालबालिकाका लागि लेख्ने लेखककले रचना तयार गर्न विशेष मिहिनेत गर्नुपर्छ । त्यसैले यदि तपाईं रहरका लागि यो कामका सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले बालबालिकाका लागि अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाई सचेत हुनुपर्छ ।
उस्तै रात दिन - by Neelam Karki 'Niharika'
– नीलम कार्की निहारिका
एकै हुन्छ मेरा लागि उस्तै रात दिन
संसार हेर्न पठायौ दैब दृिष्ट नदिई किन ?
हरियो छ भन्छन् धर्ती आकाश नीलो छ रे
लुक्दै छिप्दै डाँडाँबाट ,सूर्य उदाउँछ रे
हरियो र नीलो भन्ने, रंग कस्तो होला
आकाशले छोपी राख्या धर्ती कत्रो होला ?
एकै फेर मनभित्र तस्बिर, खिच्न पाएँ भने
कल्पी बाच्थे सबैतिर ,कालै बादल छाएपनि
आमा बाबु एकान्तमा भाग्य छाम्दै रोलान्
दिदी भनी बोलाउने भाइ कस्ता होलान् ?
छाम्दा तातो हुन्छ आसु बग्दा कस्तो होला ?
साना विद्यार्थी माथिको हिंसा कम गरौं
साना कक्षामा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाहरूले नै किन बढी बालबालिकामाथि हिंसा गरिरहेका छन् ?
यो विषयमा केटाकेटी मिडियाको कार्यालय सेतो ढोका जमल, काठमाडौंमा दशवटा विद्यालयका शिक्षिकाहरूसँग छलफल गरिएको थियो । उक्त अवसरमा यस विषयमा चासो राख्ने अभिभावक र केही विद्यार्थीहरूले पनि विचार व्यक्त गरेका थिए ।
Introduction to Korean Children's Literature - by Jung Jina
Korean children's literature has evolved over time from myth, fable, legend, old story, and traditional children's song. The modern children's literature, however, started in 1908 when Choi Nam Sun published the first issue of Sonyeon,afirst educational magazine for children in Korea.
राम्रा लेखक र असल पाठक - डा.सुशील दाहाल
भ्लादिमिर नोबोकोभ (सन् १८९९–१९६६) रूसमा जन्मिए । बेलायतमा पढे र बिसौं वर्षसम्म अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा पढाए । उपन्यास, कथा, कविता र निबन्ध विधामा कलम चलाएका नोबोकोभको सबैभन्दा चर्चित कृति हो – लोलिता । उक्त उपन्यासको लेखकस्वबाट उनले प्रशस्तै धन पनि आर्जन गरे । उनको पुस्तक ‘लेकचर्स अन लिटरेचर’ मा लेखनबारे उनका धारणाहरू सङ्ग्रहित छन् । उक्त पुस्तकमा रहेको लेखक र पाठकसम्बन्धि एक निबन्धको अंश यहा“ प्रस्तुत छ । डा.सुशील दाहालले यसलाई नेपाली अनुवाद गर्नुभएको हो ।
खेलौना होइन, किताब उपहार - गुड रिडर इज दि गुड लिडर - रामचन्द्र तिमोथी
रामचन्द्र तिमोथी एकजना सफल पुस्तक व्यवसायी तथा प्रकाशन उद्यमीका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । उहाको प्रकाशन संस्था एकता प्रकाशनले स्थापनाको करिब तीन दशक अवधिमा हजारौं पाठ्यपुस्तक, साहित्यिक पुस्तक तथा बालसाहित्य प्रकाशन गरिसकेको छ । बालसाहित्यको विकासका बारेमा गरिएको कुराकानी यहा प्रस्तुत गरिएको छ